ဘာကွောငျ့ နှားသား ကို အမဲသား လို့ချေါကွသလဲ….? မသိသေးတဲ့လူငယျမြား အတှကျ – Shwe Naung
အခုမှ ထညျထညျဝငျဝငျ သိတယျ 🥺
အသားစားသတ်တဝါထဲ၌တှငျ..သရဲ၊ သဘကျ ဘီလူး၊ကြား၊ခွငေ်ျသ့..နှငျ့ တခွားသောမကောငျးဆိုးဝါးမိစ်ဆာမြားမှာ…အသားထဲ၌..နှားသာ ကိုသာအကွိုကျဆုံးဖွဈသညျ။နှားသား၏ အနံ့မှာလညျးအညှီဆုံးဖွဈသလိုနှားသားစားခွငျးကွောငျ့လညျးသှေးသား အားကောငျးခွငျးကို ဖွဈစသေညျ။
ကွကျသတေော့.ကွကျသား.ဝကျသတေော့ဝကျသားလို့ချေါကွသညျမှာအမှနျတိုငျးပငျဖွဈသျောလညျး..နှားသတေဲ့အသားကတြော့..အမဲသားဟူ၍.ချေါဝျေါခွငျးမှာ.ထူးဆနျးလှသညျ့အပွငျ. ဘာကွောငျ့အဲဒီလိုချေါဝျေါခွငျးကို မသိသူကမြားပါသညျ။
အမဲသားဟုချေါဝျေါခွငျးမှာ.. မကောငျးသော.အမှောငျလောကသား တို့သာ ကွိုကျနှဈသကျကွသညျ. စားကွသညျ။ မကျမောကွသညျဖွဈ၍ သာမှနျလူသားတို့ အနနေဲ့.ဖွူစငျ သနျ့ရှငျးသော အသား မဟုတျကွောငျးကိုဆိုလိုသညျ။
မသနျ့ရှငျးဟုဆိုသညျမှာ…ရှံစရာကောငျးအောငျညဈပတျနသေညျဟု ပွောသညျမဟုတျပါ။ အကုသိုလျတှဖေုံးလှမျးပကြေံနသေောကွောငျ့.. မကောငျး ဆိုးဝါးမြားသာ.နှ ဈသကျသောကွောငျ့.. မသနျ့ရှငျး ၊ မဖွူစငျဘူးဟုဆိုပါသညျ။
အမှောငျလောကသားတို့ ၊ပရလောကသားတို့.. ကုသိုလျ နှငျ့ အကုသိုလျကို မသိနားမလညျ မခှဲခွားတတျသော၊ မလုပျနိုငျသောသူတို့သာ.. စားမကျဖှယျရာဟု သတျမှတျထားသော အသားဖွဈ၍ အမဲသားဟုချေါဝျေါကွသညျ။
ထို့သို့..အမဲသားကို.ကွိုကျနှဈသကျသောစားသောကျကွသော..သာမနျလူသားတို့တှငျ..ထိုသူတို့၏ခန်ဓာတှငျလညျးအငျမတနျ ညဈနှမျးခွငျးအနံ့အသကျအညှီနံမြား စှဲနလေေ၏။ မိမိကိုယျမိမိမသိသျောလညျး..အထကျမှာဖျောပွထားသညျ့..အမဲသားကိုမကျမော နှဈသကျစှာ.ကွိုကျနှဈသကျသညျ့ပရလေောကသားမြား၊ ကြားရဲတိရိစ်ဆာနျမြား၊ အစိမျးသေ၊ သရဲ ၊သဘကျ၊ ဘီလူးမြား မှာ
ထိုအသား၏အနံ့ကို.ယဉျပါးနပွေီဖွဈ၍ ထိုအသားကိုစားသောကျထားသညျ့သာမနျ လူသားမြားကို အလှယျတကူသိရှိကွ၏.. အလှယတြကူ.အနံ့ရ၏။ ထိုအနံ့ ရရှိသော လူသားတို့ကိုလညျး ထိုမိစ်ဆာတို့က ..အမဲသားကိုကွိုကျနှဈသကျ မကျမောသလို..ထိုအသားစားထားေ သာလူသားတို့ကိုလညျး မကျမောကွ၏ ..ကွိုကျနှဈသကျကွ၏။
သူတို့၏အကွိုကျဆုံးအနံ့ ၊ အစားအသောကျသညျ မညျ့သညျ့လူ၊ မညျ့သညျ့နရော၌ရှိသညျကို အလှယျတကူသိကွ၏.။ ထိုအသားကိုစားသုံးသော.လူသားတို့၌လညျး ထိုမိစ်ဆာအပေါငျးက မစားတဲ့သူမြားထကျ.. လှယျကူစှာနှောကျယှကျနိုငျ၏…လှယျစှာတိုကျခိုကျဖွတျစီးနိုငျ၏…
ထိုအသားကိုစားသုံးသောသူတို့မှာလဲ.. ကံနိမျ့၏..ဉာဏျနိမျ့၏။ ထိုကွောငျ့ပငျ..ဤနှားသား.ချေါ. အမဲသားကို.. သူတျောကောငျးတို့လောကီပညာရှငျတို့ တရားအားထုတျသောအရိယာသူတျောစငျ ပုဂ်ဂိုလျတို့ကရှောငျကဉျြ၍..မစားကွပေ။ အာဆိပျ.လြှာဆိပျ.ညံ့သညျ… ဩဇာအာဏာစကျညံ့သညျ..ပွောဆိုသမြှ ၊ ကွံစညျသမြှ၊ပကျြစီးစတေတျသညျ။လာဒျပိတျတတျသညျ။
ထိုကွောငျ့ဖွဈပါ၍.. သူတျောကောငျးမြားအနဖွေငျ့..မစားကွပါနဲ့လို့ပွောဆိုအမိနျ့ပေးခှငျ့၊ပိတျပငျတားဆီးခှငျ့မရှိပါသောကွောငျ့… မိမိတို့၏ ကိုယျပိုငျအသိဉာဏျလေးဖွငျ ဆငျခွငျသုံးသပျ၍.သတိတရားမြားရှိကွပါစေ…..
အခုမှ ထည်ထည်ဝင်ဝင် သိတယ် 🥺
အသားစားသတ္တဝါထဲ၌တွင်..သရဲ၊ သဘက် ဘီလူး၊ကျား၊ခြင်္သေ့..နှင့် တခြားသောမကောင်းဆိုးဝါးမိစ္ဆာများမှာ…အသားထဲ၌..နွားသာ ကိုသာအကြိုက်ဆုံးဖြစ်သည်။နွားသား၏ အနံ့မှာလည်းအညှီဆုံးဖြစ်သလိုနွားသားစားခြင်းကြောင့်လည်းသွေးသား အားကောင်းခြင်းကို ဖြစ်စေသည်။
ကြက်သေတော့.ကြက်သား.ဝက်သေတော့ဝက်သားလို့ခေါ်ကြသည်မှာအမှန်တိုင်းပင်ဖြစ်သော်လည်း..နွားသေတဲ့အသားကျတော့..အမဲသားဟူ၍.ခေါ်ဝေါ်ခြင်းမှာ.ထူးဆန်းလှသည့်အပြင်. ဘာကြောင့်အဲဒီလိုခေါ်ဝေါ်ခြင်းကို မသိသူကများပါသည်။
အမဲသားဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းမှာ.. မကောင်းသော.အမှောင်လောကသား တို့သာ ကြိုက်နှစ်သက်ကြသည်. စားကြသည်။ မက်မောကြသည်ဖြစ်၍ သာမှန်လူသားတို့ အနေနဲ့.ဖြူစင် သန့်ရှင်းသော အသား မဟုတ်ကြောင်းကိုဆိုလိုသည်။
မသန့်ရှင်းဟုဆိုသည်မှာ…ရွံစရာကောင်းအောင်ညစ်ပတ်နေသည်ဟု ပြောသည်မဟုတ်ပါ။ အကုသိုလ်တွေဖုံးလွှမ်းပေကျံနေသောကြောင့်.. မကောင်း ဆိုးဝါးများသာ.နှ စ်သက်သောကြောင့်.. မသန့်ရှင်း ၊ မဖြူစင်ဘူးဟုဆိုပါသည်။
အမှောင်လောကသားတို့ ၊ပရလောကသားတို့.. ကုသိုလ် နှင့် အကုသိုလ်ကို မသိနားမလည် မခွဲခြားတတ်သော၊ မလုပ်နိုင်သောသူတို့သာ.. စားမက်ဖွယ်ရာဟု သတ်မှတ်ထားသော အသားဖြစ်၍ အမဲသားဟုခေါ်ဝေါ်ကြသည်။
ထို့သို့..အမဲသားကို.ကြိုက်နှစ်သက်သောစားသောက်ကြသော..သာမန်လူသားတို့တွင်..ထိုသူတို့၏ခန္ဓာတွင်လည်းအင်မတန် ညစ်နွမ်းခြင်းအနံ့အသက်အညှီနံများ စွဲနေလေ၏။ မိမိကိုယ်မိမိမသိသော်လည်း..အထက်မှာဖော်ပြထားသည့်..အမဲသားကိုမက်မော နှစ်သက်စွာ.ကြိုက်နှစ်သက်သည့်ပရေလောကသားများ၊ ကျားရဲတိရိစ္ဆာန်များ၊ အစိမ်းသေ၊ သရဲ ၊သဘက်၊ ဘီလူးများ မှာ
ထိုအသား၏အနံ့ကို.ယဉ်ပါးနေပြီဖြစ်၍ ထိုအသားကိုစားသောက်ထားသည့်သာမန် လူသားများကို အလွယ်တကူသိရှိကြ၏.. အလှယျတကူ.အနံ့ရ၏။ ထိုအနံ့ ရရှိသော လူသားတို့ကိုလည်း ထိုမိစ္ဆာတို့က ..အမဲသားကိုကြိုက်နှစ်သက် မက်မောသလို..ထိုအသားစားထားေ သာလူသားတို့ကိုလည်း မက်မောကြ၏ ..ကြိုက်နှစ်သက်ကြ၏။
သူတို့၏အကြိုက်ဆုံးအနံ့ ၊ အစားအသောက်သည် မည့်သည့်လူ၊ မည့်သည့်နေရာ၌ရှိသည်ကို အလွယ်တကူသိကြ၏.။ ထိုအသားကိုစားသုံးသော.လူသားတို့၌လည်း ထိုမိစ္ဆာအပေါင်းက မစားတဲ့သူများထက်.. လွယ်ကူစွာနှောက်ယှက်နိုင်၏…လွယ်စွာတိုက်ခိုက်ဖြတ်စီးနိုင်၏…
ထိုအသားကိုစားသုံးသောသူတို့မှာလဲ.. ကံနိမ့်၏..ဥာဏ်နိမ့်၏။ ထိုကြောင့်ပင်..ဤနွားသား.ခေါ်. အမဲသားကို.. သူတော်ကောင်းတို့လောကီပညာရှင်တို့ တရားအားထုတ်သောအရိယာသူတော်စင် ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကရှောင်ကျဉ်၍..မစားကြပေ။ အာဆိပ်.လျှာဆိပ်.ညံ့သည်… ဩဇာအာဏာစက်ညံ့သည်..ပြောဆိုသမျှ ၊ ကြံစည်သမျှ၊ပျက်စီးစေတတ်သည်။လာဒ်ပိတ်တတ်သည်။
ထိုကြောင့်ဖြစ်ပါ၍.. သူတော်ကောင်းများအနေဖြင့်..မစားကြပါနဲ့လို့ပြောဆိုအမိန့်ပေးခွင့်၊ပိတ်ပင်တားဆီးခွင့်မရှိပါသောကြောင့်… မိမိတို့၏ ကိုယ်ပိုင်အသိဥာဏ်လေးဖြင် ဆင်ခြင်သုံးသပ်၍.သတိတရားများရှိကြပါစေ…..
ခတျေအဆကျဆကျ မွနျမာရိုးရာ အငှေ့ အသကျတှနေဲ့ အသကျ သှငျးကာ ဖနျတီးရိုကျ ကူးထားတဲ့ မအေးသောငျးရဲ့ ပုံရိပျမြား……..